Manamboatra - Quanzhou Bangni Biotechnology Co., Ltd.
Ny famolavolana dia dingana tena lehibe ao amin'ny orinasa mpamokatra insole. Saingy amin'ny fampifangaroana ny traikefa anananay momba ny famokarana sy ny haitao amin'ny fitaovana, afaka manome ny mpanjifa vokatra tsara indrindra insole orthopedic insole izahay, izay afaka manampy amin'ny fanalefahana ny olona ambany toe-javatra: fanaintainan'ny lamosina, fanaintainan'ny lohalika, fanaintainan'ny ombelahin-tongony, andohalambo nianjera, avo arch and plantar fasciitis.
Ny tsindrona polyurethane dia fomba iray lehibe hanamboarana vokatra insole sy fikarakarana tongotra. amin'ny alàlan'ny fampiasana ny teknolojianay, afaka manome ny insole PU, insole Boost ary insole Gel isika.
Poron dia fitaovana miaraka amina kalitao tsara sy fampisehoana lehibe. Ny skiving dia fomba fanamboarana sarotra tokoa, izay mitaky fitaovana marina sy mpanao asa-tanana mahay. Amin'ny alàlan'ny fitsangantsanganana an-tsokosoko dia azontsika atao ny mamadika ny fitaovana ho lasa hateviny sy endrika samihafa, ho 100% mifanaraka amin'ny volavolain'ny mpanjifa.
Amin'izao fotoana izao, ny fanaingoana no fironana lehibe eo amin'ny tsena. mba hihaonana amin'ny filan'ny mpanjifa ny famolavolana kolontsaina marika, mitondra ny fanontana sublimation ao amin'ny orinasa izahay, mba hahafahantsika mampivelatra sy manamboatra ny vokatra ho an'ny mpanjifanay amin'ny fahombiazana lehibe.